Nezvedu - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Zvikamu Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Zvatiri Uye Zvatinoita？
Shanghai Longjie Plastics inyanzvi inogadzira zvigadzirwa zvePVC extrusion. With makore anopfuura gumi indasitiri uye ruzivo rwekunze, isu takagadzira zvigadzirwa zvedu kusvika Kutuka kwePVC, fence, vinyl siding, decking, kunaya kwemvura, PVC kuumbwa nesimbi uye aruminiyamu kutuka, nezvimwewo Long Jie timu ichashanda paR & D uye ichipa mhinduro dzekugadzira dzevatengi vedu pasirese nezvakanakisa zvigadzirwa uye masevhisi. Tine chivimbo chekuti Long Jie achave wako akanaka mudiwa uye isu tiri kutarisira kushandira pamwe newe!
Nei Tichifanira Kutisarudza？
Hi-tech yekugadzira muchina
Tine gumi nemaviri extrusion yekugadzira mitsara, zuva nezuva extrusion kugona ingangoita makumi matatu matani, imwe pelletizer uye matatu otomatiki musanganiswa muchina. 2 seti yemuchina otomatiki jigsaw muchina, 2 seti yemuchina wekutemera, 3 seti yemabhomba michina, 2 seti e otomatiki shrink yekuisa muchina muchina, 1 seti yekucheka michina,
Yakasimba R&D Simba
Team manejimendi timu
Tine 5 mainjiniya mune yedu r & d nzvimbo. Ivo mamaneja emhizha avo vese vari matafura akaumbirwa ane makore mazhinji ehukama uye neruzivo rwebasa. Ivo vari kuita bhizinesi manejimendi, kuronga kwekushambadzira, kushambadzira, kutengeserana kwepasirese, kugadzirwa kwechigadzirwa, uye mamwe makuru. Ivo vanoziva nemanejimendi manejimendi ehurongwa hwakasiyana hwehupfumi.
Zvakajairika hunhu hwevamiriri veboka revatungamiriri:
Dzidzo yekumashure: Koreji degree kana pamusoro, yakasimba Enterprising,
Chiitiko chebasa: Makore mazhinji eruzhinji ruzivo uye ruzivo rwebasa, ane mashandiro anoshamisa mune yehunyanzvi ndima uye inoshamisa hunyanzvi kugona.
Hukama hwehukama: Iva nechido chakasimba uye hukama hwehukama hwehukama.
Hunhu hwehunyanzvi: Kuvimbika, tevera zvinangwa zvekambani, teerera nemitemo yenyika uye hunhu hwemagariro.
Memberteam yakakosha nhengo:
Liu lei: technical director wekambani
Director wekusimudzira kambani uye dhizaini
Yakaomarara Hunhu Kudzora
1 nyanzvi ipqc ine hunyanzvi hwebhizimusi hunyanzvi muchikamu chekuwedzera uye kurongedza;
2 isu tine yakakwana system kuve nechokwadi chekugadzira mhando yepamusoro chigadzirwa;
3 isu tinopa kurudziro kune vashandi maererano nebasa ravo rebasa;
5 isu tine yakakwana chigadzirwa chigadzirwa chekuongorora sisitimu, maawa maviri ekuongorora kwese uye zvisina kujairika kuongororwa, kukurumidza mhinduro kana matambudziko awanikwa, uye kuteedzera maitiro ekugadzirisa kusvikira dambudziko ragadziriswa zvachose, uye nyora mishumo isina kujairika yeiyo chaiyo-nguva yemhando yekudzidzira huwandu data;
6 isu tinogara tichidzidziswa nevashandi vehunhu kusimudzira hunyanzvi hwehunhu uye hunhu, kuvakurudzira kuti vave nechokwadi chekuti zvese zvavakaita kusangana nemitemo.
7 isu tinoshandisa nzira dzakawanda kuyedza mhando yechigadzirwa.
1.) yekuongorora nzira dzepanyama, isu takafambira mberi cantilever danda yekuyedza michina, kudonha bhora yekuyedza michina, rockwell kuomarara testers, tensile michina, nezvimwe;
2.) makemikari ekuongorora nzira, yenguva dzose tembiricha hovhoni, kuchembera tester, kuchena mita;
3.) nzira dzekuongorora zvipenyu. Isu tinogara tichipa zvigadzirwa zvedu kuti zviongororwe neanokwanisa-wechitatu-bato yekuyedza agency ine bvunzo mushumo; iyo inodawo kuti mutengesi ave neyakaonekwa bvunzo mushumo yakasungirirwa pairi;
4.) chigadzirwa mhando yekuyedza nzira, yekujaira kuyedza, sampling kuyedza, nezvimwe;
5.) nzira dzekuongorora dzinonzwa, nhengo dzechikwata-dzinoyedza mhando maoko ekare anga achishandira kambani kwemakore mazhinji, vane simba rakasimba kusiyanisa edu ehunhu matambudziko ehunhu; mune sampling, masampuli ayo anoratidza chigadzirwa hunhu anogona kutorwa chaizvo chaizvo pakuongorora kwesainzi.
Kudonha bhora muedzo
Cantilever inokanganisa kuyedza muchina
Yakajairwa ruvara mwenje bhokisi
Nguva dzose kutonhora hovhoni
Kugadzira Unyanzvi Ratidza
Machina edu ekutsikisa ese akatengwa fomu jinwei michina co., Ltd., Mutevedzeri wasachigaro wepamba epurasitiki michina indasitiri musangano muChina. Tine gumi nemaviri makumi matanhatu neshanu nemakumi matanhatu nemashanu michina yekuwedzera michina uye matanhatu makumi mana nemashanu mhando mhando anobatsira michina, uye yega yega yekugadzira tambo ine yekugadzira zuva nezuva inokwana matani matatu epvc inosanganiswa. Kuburitswa kwegungano rekuseri-kwekupedzisira uye chikamu chekupakata chakashongedzwa zvakanyanya, iine makumi mana evanoshanda vane hunyanzvi, izvo zvinogona kupedza zvachose kumberi-kumagumo extrusion kugona; zvinovimbisa kugona kwezuva nezuva kugona kwematani makumi matatu ezvigadzirwa.
Nezve mhando kutonga:
Kunopindirana fekitori kuratidza:
Fekitori basa ratidza:
Fekitori kurongedza basa ratidza:
Technical Simba Uye Dhizaini Uye r & d Kugona
Kubva pakagadzwa, isu tagara takaomerera kune yesainzi yekuvandudza pfungwa, kutora tekinoroji kutsvagisa nekusimudzira uye kudzidziswa kwevashandi sezvinangwa zvedu zvekuvandudza. Isu tine dhipatimendi rakazvipira reR & d, tichivimba nerutsigiro rwehunyanzvi kubva kumuzinda weshanghai, uye tine ruzivo rwakapfuma uye hunyanzvi hwevashandi veR & d. Isu tinonamatira kwakakosha kutsvagiridzo nekuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva kana maitiro matsva, inodyara muhuwandu hwakawanda hwekutsvagisa nekusimudzira gore rega rega, yakawana mhedzisiro yakanaka, uye yakanyorera huwandu hwemvumo.
Mukutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira, isu tinosimbisa kuchinjana pamwe nekubatana nemasangano ekutsvagisa epamba zvinoenderana nekusimudzira tekinoroji uye kudiwa kwemusika. Chinja mhedzisiro yesainzi kuita zvibereko kuburikidza nehunyanzvi hwekutanga uye mushandirapamwe kuvandudza, uye gadzira zvakanakira mabhizinesi Parizvino, isu takagadzira dzakasiyana siyana fenzi uye magadhi ekuchengetedza akakodzera kuminda yakawanda, kusanganisira mapindu, kuchengetedzwa kwemukati, matare, mapaki, mapurazi emabhiza uye mamwe marudzi emayuniti, kuti zvigadzirwa zvitengeswe zvizere kueurope, nyika dzakabatana, Australia , new zealand uye southeast asia. Pasi.
Isu tasimbisa yakareba-mushandirapamwe kutsvagisa nekusimudzira hukama ne anhui conch boka, uye takaita zvakadzama tsvagiridzo nekusimudzira pane zvepanyama uye zvemakemikari zvivakwa zvekunze chimiro mafomati, uye takawana mhedzisiro. Uye mukusimudzira uye kushandiswa mumusika, mutengi anogutsikana kwazvo uye ave achibvumirana pamwe chete nemutengi.
Kambani r & d Maitiro Ekutungamira
1) mushure mekugamuchira iwo r & d kuraira, iro dhipatimendi rehunyanzvi rinoronga dhizaini yekugadzira uye yekuvandudza, inogadza mutungamiri wedhizaini, inogadzira r & d dhizaini dhizaini, uye inogadzirira iyo "Dhizaini uye chirongwa chekuvandudza"
2) iye munhu anotarisira dhizaini anogadza zvirimo zvemhando dzakasiyana-siyana dzehunyanzvi zvinoenderana nedhizaina dhizaini uye hunhu nezvinodiwa zvechigadzirwa, inotaurisa nzvimbo dzehunyanzvi kune vese vagadziri, uye inonyora iyo "Dhizaini uye yekuvandudza yekuisa runyorwa".
3) dhizaini dhizaini chigadzirwa chigadzirwa maererano nedhizaini dhizaini. Technical technical director akaunganidza vashandi vanokodzera vedu kuti vaite chirongwa chekuratidzira. Mushure mekunge chirongwa chapasiswa, munhu anotarisira dhizaini anoita hunyanzvi dhizaini zvinoenderana nechirongwa chakatenderwa, kusanganisira madhirowa nemaitiro, uye anoronga vashandi vanokodzera kuti vadzokorore dhizaini, vagadzire marekodhi, uye vagadzire iyo "Dhizaini nekusimudzira mushumo wekudzokorora".
4) iyo dhizaini inoitisa bvunzo yekuongorora pane chigadzirwa zvichibva pamhedzisiro yekudzokorora, uye inogadzirira iyo "Dhizaini uye budiriro yekusimbisa mushumo"
5) mushure mekunge chigadzirwa chemhando yechiedzwa chakakwanisika, mugadziri achatora dhizaini yekugadzira dhizaini uye yekugadzira maitiro kuraira, mutungamiri wedhizaina anoongorora, uye director director anozoiburitsa mushure mekubvumidzwa, uye gadzirira iyo "Dhizaini uye budiriro yekuburitsa runyorwa".
6) mushure mekuburitswa kwezvigadzirwa zvehunyanzvi, dhipatimendi rebhizinesi rinoisa odhi yemasampuli, uye dhipatimendi rezvigadzirwa rinoita sampuro zvinoenderana nezvinyorwa zvehunyanzvi; vagadziri vanoongorora uye vanoratidza iwo masampuli uye voita yekuyedza yekugadzira pfupiso mishumo.
7) mushure mekubudirira kwemuenzaniso wekuyedza kugadzirwa, diki batch bvunzo yekugadzira ichaitwa. Iye munhu anotarisira dhizaini anosimbisa kuita kwechigadzirwa uye zviratidzo zvehunyanzvi kuburikidza nechigadzirwa technical technical performance bvunzo uye mushandisi mhinduro, uye inogadzirira "Dhizaini nekusimudzira mushumo wekusimbisa".
8) mushure mekugadzirwa kwapera, munhu anotarisira dhizaini anogara achitarisisa kushandiswa kwezvigadzirwa zvitsva uye anoramba achivandudza zvigadzirwa zvitsva.
Gadzira "Mutengi-centric" Corporate tsika. Zvinhu zvitanhatu zvemakambani tsika: Mutengo, mhando, sevhisi; zvinangwa, maitiro, uye kuongorora. Tekinoroji hunyanzvi uye manejimendi hunyanzvi hunomhanya kuburikidza neyakaitika yese yekambani tsika yekuvaka.
Kutarisana nemamiriro ezvinhu matsva nemikana mitsva, suzhou langjian akaisa pamberi zano rekufunga re "Century Enterprise, centennial innovation, centennial brand".
1) chirongwa chekudyidzana nedzimwe nyika chachinja kubva kune vane ruzivo chinese bhizinesi rakazvimirira kuenda kunezvazvino bhizinesi nemhando dzepasi rese uye nyanzvi yekugadzira nekushanda kugona
2) musika wekupinda nzira-gadzirisa yakatarwa musika positioning.
3) chigadzirwa kuvandudza zano-gadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro
Kambani TsikaCustomer Boka Photo
Project Case Ratidza
Kuratidzira Simba Ratidza